Imifanekiso emitsha yokugqibela yeGlass Note 8 | Iindaba zeGajethi
Imifanekiso emitsha yokugqibela yeGlass Note 8
Nge-23 ka-Agasti, i-Galaxy Note 8 entsha iza kuziswa ngokusesikweni, indawo apho inkampani yaseKorea ifuna ukuba silibale ngokupheleleyo iNqaku 7 nazo zonke iingxaki ezibonakalise kwimarike kwaye banyanzela inkampani ukuba irhoxe Zonke iimarike apho ibithengiswa khona. Njengesiqhelo, iSamsung ibiphethe into yokucoca kancinci kancinci kungekuphela nje kweempawu zetheminali kodwa ikwacoca neendawo ezahlukeneyo apho sinokubona uyilo lokugqibela ukuba i-terminal iya kujongeka njani. Kodwa ukunikezela, ukunikezela kwaye akusiniki mvakalelo efanayo yokuba ifoto ebonakalayo yesiphelo inokusinika.
Kwakhona, uthungelwano lwentlalo ye-Weibo ibinguye obephethe ukupapasha iifoto ezahlukeneyo zesiphelo, apho sinokubona indlela esijongeka ngayo isiphelo, i-8,5 mm, sithathela ingqalelo ukuba ngaphakathi kuyo kubhaliwe esinokuthi sinxibelelane ngayo kwiscreen. Kuyo yonke imibala eya kuthi ifike kuyo kwintengiso, le mifanekiso Sibonise isiphelo sendlela esimnyama esimenyezelayo, kunye nekhamera ephindwe kabini ngasemva kunye ne-sensor yeminwe ebekwe ecaleni kwekhamera yekhamera ephindwe kabini, eya kusithintela ekungcoliseni ilensi ngalo lonke ixesha sivula i-terminal.
Ngaphakathi kwisiphelo siza kufumana i-Snapdragon 835 ehamba ne-6 GB ye-RAM, iscreen se-AMOLED esikwi-6,4-intshi, nangona amanye amarhe athi iya kuba zii-intshi ze-6,3, i-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina eyandisiweyo ngekhadi le-MicroSD. Njengoko besipapashe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kunokwenzeka ukuba esi siginali fika eYurophu ngohlobo lweSIM ezimbini, eziya kusivumela ukuba sisebenzise i-terminal kunye neefowuni ezimbini kunye, njengama-terminals amaninzi aseTshayina afikelela kwintengiso.
Anditsho ukuba abazitshayeli ngaphambi kokuthatha iifoto, kodwa ubuncinci banokuba nazo wasusa iimpundu ngaphambi kokuba athathe iifoto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Imifanekiso emitsha yokugqibela yeGlass Note 8
Ubugcisa be-elektroniki buyayeka ukukhula koPhumo lweMisa: Andromeda
Umbane weVW Microbus uqinisekiswe yinkampani ngo-2022